शब्दकोश: आफैँ आफ्नो साथी भएँ
यतिखेर कसैको चालचुलको पर्खाइमा छु । व्यर्थ छ भन्ने जान्दाजान्दै पर्खिनु मेरो कत्रो उल्लूपन ! प्रतिक्रिया सुन्नको लागि यति मरेको छु, यतिसम्म पूकार मैले ईश्वरसँग त के आफैँसँग पनि यसअघि गरिनँ सायद । एउटा यस्तो प्रतिक्रियाको शीतल, जसले आफ्नो अस्तव्यस्त उडानलाई झट्ट भरोसापूर्ण सतह देओस् । यो मेरो इच्छा मानौँ नामुद साहुजीको विलासिताकै फेहरिस्त हो सायद, कहिल्यै पूरा नहुने । मेरो पर्खाइ बूढो हुन्छ, राल-सिँगानमा झोक्रिन्छ, हेपाइमा पर्छ र यस्तैयस्तैमा घिटघिटो खप्दै मर्छ । म प्रार्थनामा के बोल्छु, मेरो वरदाताले फिटिक्कै बुझ्दैन । अथवा बुझे पनि अहम्‌तालाई थोरै सङ्कुचन पारेर मसम्म आफूलाई सस्नेह झुकाउँदैन । आत्मीयताको नयाँ परिभाषा मेरै परिवेशमा बन्दै छ । मेरो लगाव र आशक्तिलाई नोकरसरि आफूप्रति पिछलग्गु बनाइराख्‍ने उसको अव्यक्त भावले म अझसम्म अभिशप्त छु क्यारे । यो कस्तो विपत्ति ! म आफ्नो गीतरचना आफैँ सङ्गीतकारको धुनमा आफैँ गायककारद्वारा अनि आफैँ स्रोतालाई सुनाउँदै छु । मेरो छेउमा पर्खिएको तिर्खालु कोही छैन ।
कहिलेकाहीँ झल्यास्स हुन्छु, जिन्दगीमा मैले केही गल्ती पक्कै गरेँ । बोध गर्न थाल्छु । त्यो पनि कस्तो गल्ती भने, आफ्नै जिन्दगीलाई स्पस्टता नदिने र रनभुल्ल पारेर पेन्डुलम बनाउने गल्ती । र, त्यो अब सच्याएर अनि पछुताएर टाउको ठोक्दैमा विषरहित हुने हो र ? यस्ता गल्ती गर्नेहरूको सूचीमा म पनि अब एक प्रत्यक्ष उम्मेदवार । संविधानसभापछिको कानुन निर्माणमा तर यो उम्मेवारको कुनै भूमिका छैन । समझदारी होस् भन्ने चाहने नाममा जे जस्तो हुन्छ होस् भनेर छाडिदिने बेहोसी ताल अपनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । समझदारी र स्वतन्त्र यात्रामा आपसी सम्मान र चासोको सापेक्ष पाटो अवश्य रहन्छ । जहाँ अर्काप्रति चासो र खुलदुली रहँदैन, त्यहीँ सम्बन्धको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
कवि तथा गीतकार रमेश क्षितिजको गीतसँगालोको नामलाई यस लेखको शीर्षक बनाउँदा मैले सोचिनँ- 'कठै ! क्षितिजबाबूले पनि मेरै अनुभूति पार गरे ?' मैले यस्तो सोच्नु सोह्रै आना मूर्खता हुनेथ्यो । कारण, एक्लोपनको चरी बिचरीको व्यथा भोग्ने त आजको जस्तो अनकन्टार सांसारिक जङ्गलमा जो पनि हुन्छ । स्कुले बेलामा 'मेरो सानु साथी' (भवानी भिक्षु) कथा पढेसँगै एक्लोपनको छिपछिपे अनुभूतिले म त कहालिन सुरु गरेँ । कथाको आशय छ- चाहेर कसैले कसैको साथ दिने होइन र नचाहेर पनि नछुट्टिई बस्न सकिने होइन । यात्रा गर्नुपर्ने आखिर एक्लै एक्लै...
र, तपाईँलाई जस्तै मलाई पनि लाग्दैन, दिल र दिमागमा बतासिएर उठेको एक्लोपनको यो भट्किँदो डुङ्गाले सन्तुलनको किनारा भेट्टाउनेछ । विज्ञापन फुकेरै पनि सुनुवाइ नहुने आजको हतारिएको संसारमा भावनाको बोल सुन्ने फुर्सदमा को नै होला र ? र, सुनेवापत जागिरको तलब दिने पनि कसले ? आजको अस्तित्वले तलबी कामलाई बाहेक दायित्व सोच्ने पनि त होइन ।
यात्रा साँच्चै एक्लै...एक्लै ...
मे ११, २००८ (नक्साल)
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, May 12, 2008